Nezvedu - Yiwu Yican Trading Co., Ltd.
Delvis, yakavambwa muna 2018
Delvis imhando yeYiwu Yican Trading Co., Ltd.
Delvis ine chinangwa chekupa zvipfeko zvemitambo zvinodhura. Zvigadzirwa zvayo zvinofukidza kunze bhasikoro, kumhanya, Indoor Yoga kutamba, kubuda mumugwagwa, panguva imwe chete, kugadzirisa kwepamusoro-yekupedzisira imba yekuwedzera yemunda, yekutengesa network pasi rese, inofarirwa neruzhinji rwevatengesi uye. vatengi. Inotungamirwa nezvinodiwa nevatengi, DELVIS ine inonzwika sevhisi sevhisi system, uye nekushingaira kupindura kune itsva retail modhi kuti uwedzere ruzivo rwemushandisi.
Delvis inoshingairira kuvandudza musika wepasirese, chigadzirwa chinotengesa kuEurope neAmerica, Middle East, Southeast Asia neSouth America uye zvichingodaro nyika zana, iyo Permanent Foreign Trade Exchange Exhibition Hall, yemutengi akatarisana-kutarisana kutengeserana kubva kumativi ese. nyika, imwe Alibaba International Station, kutendeseka, Yiwu yekutenga uye imwe online yekutengesa chikuva, pamwe neiyo huru nyanzvi yekuratidzira uye mamwe epamhepo uye online akasiyana nzira dzekutengesa. Iyo kambani inotakura pane akawanda-channel kushambadzira, inotumira iyo yepamusoro chigadzirwa kumusha wevatengi, inobatsira mutengi wega wega kugadzira iyo yepamusoro yemhando yekufamba chiitiko, inogadzira hupenyu hunofadza.
Mune ramangwana, delvis acharamba akazvipira kupa yakaderera, inodhura-inoshanda zvipfeko zvemukati zvemitambo, Yoga kupfeka uye yoga masokisi uye sevhisi yakanakisa yekuvandudza hupenyu hwevatengi, vachivimba nechikwata chehunyanzvi uye yakasimba network kushambadzira, kushanda. nekutendeka uye nemazvo, kugadzira kukosha kune vatengi, vashandi, vanogovana, nzanga uye vamwe vanobatika, kuti varambe vachiwedzera simba rebhizinesi, kupayona uye hunyanzvi, kutevedzera chinangwa chepakutanga chekupa hupenyu hwepamba husingadhuri, hune musoro uye hwakavimbika. mitengo yevatengi kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvekumba, kuitira kuti munhu wese anoda hupenyu anakirwe nehupenyu hwekugwinya hunonakidza.
Sport Suit Men, Hot Yoga Pants Outfits, Black Shorts, Mens Wool Vests, Biker Shorts Vakadzi, Grey Yoga Pants Chipfeko,